मलाई बचाउनुहोस् …. जिबन र मृ,त्यु संग लडिरहेकी १४ बर्षे चेली (भिडियो ) – Tufan Media News
मलाई बचाउनुहोस् …. जिबन र मृ,त्यु संग लडिरहेकी १४ बर्षे चेली (भिडियो )
१८ पुष २०७७, शनिबार १८:३९
(भिडियो समाचारको अन्त्यमा छ)५९ वर्षीय बृ,द्धको मनमा कसरी आयो ६ वर्षकी बा,लिका माथि यस्तो घि’न ला’ग्दो सोँच ?
काठमाडौ । नातिनी उमेरको बालिका माथि बृ,द्ध पुरुषको घि’न ला’ग्दो सोंच कसरी आउँछ होला कल्पना पनि गर्न सकिदैन । तर उदयपुरमा त्यस्तै घ,टना भएको छ । ५९ वर्षका वृद्ध ६ वर्ष बालिका माथि घि’न ला’ग्दो कर्म गरेको अ,भियोगमा प,क्राउ परेका छन् ।
कल्पना गर्न पनि नसकिने यस्तो घट,ना बेलका नगरपालिका– ३ मा बालिका एक बृ,द्ध पुरुषवाट पी’डित भएकी हुन् । पुरुषले छ वर्षी,या बा,लिका माथि घि’न ला’ग्दो काम गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यलय रामपुर ठोक्सीलाका अनुसार प,क्राउपर्नेमा बेलका–३ का ५९ वर्षीय खड्गबहादुर विक रहेका छन् । घट,नाको जाहेरी शुक्रबार इप्रका रामपुरमा परेपछि विकलाई प्रहरीले प,क्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तेजबहादुर दाहालले बताउनुभयो ।
बालिकाको शुक्रबार साँझ नै जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा स्वास्थ्य जाँच गराइएको र अहिले स्वास्थ्य सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।